Miverina Tsy Misy Ireo “Birds”: Mahazo Governemanta Vaovao I Antigoa & Barboda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2014 14:50 GMT
Nahazo seza 14 noho telo ny Antokon'ny Mpiasa any Antigoa and Barboda (ABLP) tamin'ny fifidianana faobe nataon'ny firenena tamin'ny Alakamisy, ka nandreseny ny antoko eo amin'ny fitondràna, ny Antoko Miara-Mivoatra izay nitetika ny haka fe-potoana fitantanana in-telo mifanesy. Nanao fianianana ho Piraiminisitr'i Antigoa sy Barboda i Gaston Browne, mpitarika ny ABLP, omaly. Ity no fotoana voalohany hananganan'ny antoko ny governemanta ka tsy tarihinà mpikambana avy ao amin'ilay fianakaviana miteraka adihevitra, Bird.
Naneho ny fankasitrahany ny fandresena i Lycie Jollygirlsailor Riley tao amin'ny Facebook :
Arahabaina ny Antokon'ny Mpiasa any Antigoa amin'ny fakany indray ny FAHEFANA eo amin'ny nosiko! #Change #Future
Eto no ahitana ireo fahana Twitter ho an'ny fifidianana any Antigoa sy Barboda.
Avy amin'i Daniel Wendell ny sary nampiasaina tanatin'ity lahatsoratra ity, ary nampiasaina teo ambany fahazoan-dàlana Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons. Tsidiho ny tahirin-tsarin'i Daniel Wendell ao amin'ny flickr.